အိမ်ပြင်မထွက် အသက်ရှည်စေ | NPE
COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ လူငယ်တစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း
ကမ္ဘာနှင့် တစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ရောဂါ ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိသည်။
လူငယ်များသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရမည်ကို အလွန်အမင်းထိတ်လန့်မှု မရှိကြချေ။ အချက်အလက်များ အရ ကူးစက်ခံရသူများတွင် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၂၀ - ၄၀ အရွယ်လူငယ်များဖြစ်ကြပြီး ကြပ်မတ်ကုသ ဆောင် (ICU) တွင် ကုသနေသော လူနာများ၏ လေးရာခိုင်နှုန်းသည် လူငယ်များဖြစ်ကြသည်။ အရေးကြီး သောအချက်မှာ ထိုအသက်အရွယ်အပိုင်းသည် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသော အရွယ်ပိုင်းဖြစ်သဖြင့် ကူးစက်ခံရလွယ်ပြီး ကူးစက်ခံရလျှင်လည်း ရောဂါကိုအလွယ်တကူ ပျံ့နှံ့နိုင် စေခြင်း ဖြစ်သည်။
COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးက အသက်နှင့်ရင်း၍ ရရှိခဲ့သော အတွေ့ အကြုံကို ဤသို့ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။
ပထမနေ့။ ချောင်းခြောက် စဆိုးလာပါတယ်၊ လည်ချောင်းလည်းနာလာပါတယ်။ သတိထားမိတာက တစ်ကိုယ်လုံးနုံးခွေပြီး မလှုပ်မရှားချင် ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ဒုတိယနေ့။ ခေါင်းကိုက်လာပါတယ်။ ချောင်းဆိုး တိုင်း ခေါင်းကိုတက်ဆောင့်သလို ခံစားရပါတယ်။ မလှုပ် နိုင်အောင် နုံးခွေပြီး တစ်ချိန်လုံး အိပ်ရာထဲမှာ လှဲနေ ရပါတယ်။
တတိယနေ့။ ချမ်းတုန်ပြီး အဖျားတက်လာပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာလည်း ပိုဆိုးလာပါတယ်။ လူလည်း အလွန်နုံးနေပါတယ်။ ဆေးခန်းသွားပြပါတယ်။ ဆရာဝန် က ပိုးသတ်ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့ အားဆေး တွေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့နဲ့ ရေများများ သောက်ဖို့မှာလိုက်ပါတယ်။
စတုတ္ထနေ့။ အဖျားကျလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ရှူကျပ်ပြီး မောလာပါတယ်။ ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ အလေးတစ်ခုခုနဲ့ ဖိထားသလို ခံစားရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ် ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း အသက်အောင့်ပြီး တစ်မှတစ်ဆယ် ရေတွက်ကြည့်မိပါတယ်။ ကောင်းစွာရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ COVID-19 စစ်ကြည့်ရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး ရေများများဆက်သောက်ပါတယ်။
ပဉ္စမနေ့။ ပြခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဆီ ထပ်သွားပါတယ်။ COVID-19 စစ်ပေးဖို့ ပြောပြပါတယ်။ ဓာတ်မှန်လည်း ရိုက်ကြည့်ပါတယ်။ ဓာတ်မှန်မှာတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဘာမှ မတွေ့ရပါဘူး။ ဆရာဝန်က အိမ်ထဲမှာပဲဆက်နေဖို့ ပြောပါ တယ်။ အဖြေရဖို့ ငါးရက်၊ ခြောက်ရက်ကြာမယ်လို့ ပြောပါ တယ်။
ဆဋ္ဌမနေ့။ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး တွေ ဆက်သောက်နေရပါတယ်။ ချောင်းဆိုးပြီး အသက်ရှူမဝ ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ အဖျားလည်း မကျသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီး နုံးခွေမနေတော့ပါဘူး။
သတ္တမနေ့။ နည်းနည်း သက်သာလာပါတယ်။ လူလည်း နည်းနည်းတော့ လန်းလာပါတယ်။
နဝမနေ့။ ချောင်းကတော့ ဆိုးနေတုန်းပါပဲ။ လူကတော့ နေကောင်းလာသလိုပါပဲ။
ဒသမနေ့။ COVID-19 စစ်ထားတဲ့ အဖြေထွက်လာပါ တယ်။ ရောဂါပိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေကောင်းလာလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကံကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ နောက်ထပ် လေးပတ် လောက် အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲက သတင်းအချက်အလက်တွေကို အမှန်တွေလို့ တထစ်ချမယုံကြပါနဲ့။ စဖျားပြီး သုံးရက် အတွင်း ခံစားရတာအတော်ဆိုးပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်နဲ့ အားငယ်စိတ်တွေရဲ့ ဖိစီးမှုတွေဟာ အတော် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးတွေနဲ့ လုံးဝမတူပါဘူး။
ဘယ်ကဘယ်လို ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ စဉ်းစား ကြည့်မိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ လေးရက်စလုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ကလပ်တွေမှာ ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း ဆုံနေကြ ပါပဲ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာစပြီး နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိပေမယ့် ကိုယ့်ကို တော့ မကူးနိုင်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ လူစုလူဝေးကို ရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲနေသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်မိပါဘူး။ အခုတော့ လူစု လူဝေးကို ရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲနေသင့်တယ် ဆိုတာ အခုအချိန်မှာ အရေးကြီးမှန်း အသက်ကိုရင်းပြီး သိလိုက်ရပါပြီ။
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာက မိမိထံမှ ဘယ်နှယောက် ရောဂါကူးစက်ခံရသွားသလဲဆိုတာကို တွေးမိနေတာပါပဲ။
ရှေးဦးစွာ ထိတ်လန့်ခြင်းမဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကပ်‌ရောဂါများအားလုံးသည် လူသားများ၏ မြင့်မားသော အသိဉာဏ်နှင့် ညီညွတ်သောအင်အားအောက်တွင် ပျောက်ကွယ်ကုန်ကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။
ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ် မေတ္တာပို့ အမျှဝေခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင်၏ စိတ်ဓာတ်အင်အားကို ပြည့်ဝနေစေသည်။
အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မီးဖိုခန်း၊ ထမင်းစားပွဲ၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ ဖိနပ်စင်တို့၏ သန့်ရှင်းရေးသည် ယခုအချိန်တွင် အရေးကြီးလာသည်။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် နေ့စဉ်သတင်းအချက်များ ရယူနိုင်သည်။ ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့်ဖလှယ်နိုင် သည်။ အွန်လိုင်းမှ ဂိမ်းများသည် အချိန်ဖြုန်းရာတွင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အွန်လိုင်းတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ကစားသမားများနှင့် စစ်တုရင်ကစား နိုင်သည်။
နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေရာကျဉ်းပြီး ထိရောက်မှုရှိသော လေ့ကျင့်ခန်းမှာ စင်္ကြံလျှောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အလျား ၁၀ ပေခန့် နေရာ ရှိလျှင် ခြေလှမ်းများကို အာရုံစိုက်၍ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လျှောက်ခြင်းသည် အိမ်တွင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ကြားနေရသော ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ COVID -19 သည် ရုတ်ခြည်းဆိုသလို အချိန်မရွေး မိမိ အနားသို့ ရောက်လာနိုင်သည်။ ကျန်းမာနေသော မည်သူ မဆို အိမ်တွင်းအောင်း မနေလိုကြချေ။ သို့ရာတွင် မိမိ ဘယ်အချိန်က ကူးစက်ခံလိုက်ရမှန်း မသိလိုက်ခြင်းနှင့် မိမိသည် ရောဂါဖြန့်ဖြူးနေသော သူတစ်‌ယောက် ဖြစ်နေ မှန်းမသိခြင်းသည် လူစုလူဝေးများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းမှာပဲ နေထိုင်ခြင်းသည် ယခုအချိန်တွင် အရေးကြီးသော ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ကူးစက်မခံရအောင် လည်းကောင်း၊ မိမိသည် ရောဂါဖြန့်ဖြူးသူတစ်ယောက် ဖြစ်မလာရန်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရမည့် တာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်လာသည်။
ယခုအချိန်တွင် အိမ်ပြင်မထွက်ခြင်းသည် အသက် ရှည်စေခြင်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက်ပါသည်။ ။
1. 22 Year-Old Who Tested Positive for Coronavirus. https://newswav.com
2. Stay Home, Save Lives. https://www.stayhomesavelives.us.com